» राम लिम्बुको ‘साँईली’ ले मच्चायो तहल्का, लाईभ राउण्डमा यस्तो भयो
राम लिम्बुको ‘साँईली’ ले मच्चायो तहल्का, लाईभ राउण्डमा यस्तो भयो
२३ कार्तिक २०७६, शनिबार १८:२९
मकवानपुर, २३ कात्तिक । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ सिजन २ को लाईभ राउण्डसँगै भोटिङ राउण्ड सुरु भएको छ । नकआउटबाट लाईभमा पुगेका १२ जना प्रतियोगीहरु लाईभ राउण्डमा भिडिरहेका छन् । यस वर्ष आफुलाई मनपर्ने प्रयितोगीलाई नेपाल, भारतका साथै कतारबाट एसएममार्फत र प्रभु पेको एप मार्फत विश्वभरबाट भोट गर्न सकिने भएको छ । यस भिडियो सिरिजको पहिलो भागमा लाईभ राउण्डको पहिलो एपिसोडमा कसले कस्तो गाए त्यस बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । भ्वाईस अफ नेपालका अन्य एपिसोडहरु बारे जान्न हाम्रा थप भिडियोहरु हेर्नसक्नुहुनेछ । हेरौँ भिडियो–
लाईभ राउण्डको पहिलो एपिसोडमा टिम प्रमोद र टिम आस्थाका ६ जना प्रतियोगीहरुले प्रस्तुति दिएका थिए । पहिलो प्रस्तुति मोरङकी मेचु धिमालले दिएकी थिईन् । ‘सपना भई आँखामा’ बोलको गीतमा उनको प्रस्तुतिलाई चारै जना कोचले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । मेचुको भोटिङ कोड ०६ हो । उनी कोच प्रमोदको टिममा छिन् । दोस्रो प्रस्तुति बानेश्वर काठमाडौँका आरिफ रौफले दिएका थिए । आरिफले ‘रंगीन चरा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको सबै कोचले तारिफ गरेका थिए । उनको भोटिङ कोड ०१ हो । उनी कोच आस्थाको टिममा छिन् । तेस्रो प्रस्तुतिमा झापाका बलबहादुर राजवंशीले मन छुने प्रस्तुति दिएका थिए । उनले ‘प्रिय तिम्रो सम्झना’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिलाई सबै कोचले तारिफ गरेका थिए । उनको भोटिङ कोड ०३ हो । उनी कोच प्रमोदको टिममा छन् ।
त्यस्तै चौथो प्रस्तुतिमा दार्जिलिङकी याङ्की योल्मोले प्रस्तुति दिएकी थिईन् । उनले ‘केही मिठा बात गर’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । फरक फ्युजन सहितको उनको प्रस्तुतिलाई चारै जना कोचहरुले तारिफ गरेका थिए । उनको भोटिङ कोड १२ हो । उनी कोच आस्थाको टिममा छिन् । पाँचौ प्रस्तुतिमा बिर्तामोड झापाका राम लिम्बुले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले अभिनयसहित ‘सुन साईली’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिलाई कोच प्रमोद र आस्थाले स्टान्डिङ अवेशन समेत दिए । उनको फरक प्रस्तुतिलाई दर्शक तथा कोचहरुले समेत निकै तारिफ गरे । राम पहिलो एपिसोडको ‘पर्फमर अफ द डे’ समेत हुन सफल भएका छन् । उनको भोटिङ कोड ०८ हो । उनी कोच प्रमोदको टिममा छन् । लाईभ राउण्डको पहिलो एपिसोडको अन्तिम प्रस्तुति मकवानपुर घर भई हाल बालुवाटारमा बस्दै गरेकी सशिका राईले दिएकी थिईन् । उनले ‘अजम्बरी लाउँला पिरती’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको भोटिङ कोड ११ हो । उनी कोच आस्थाको टिममा छिन् । यसरी लाईभ राउण्डको पहिलो एपिसोडमा मेचु धिमाल, आरिफ रौफ, बलबहादुर राजवंशी, याङ्की योल्मो, राम लिम्बु र सशिका राईले प्रस्तुति दिएका थिए ।
आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको प्रस्तुति मनपर्यो ? को बन्ला भ्वाईस अफ नेपाल सिजन २ को विजेता ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
लाईभ राउण्डमा पुगेका उत्कृष्ट १२ आवाज(भिडियो)